Amathiphu Kusuka ku-Semalt: Okunye Okunye Ukuze Ube Nedatha Engemuva Ku-Google Analytics
Ukunemba kwezibalo zakho, idatha, kanye nemibiko ku-Google Analytics kusho okuningi ngemibono yakho yebhizinisi nobuchwepheshe. Ekukhangiseni kokuqukethwe, ama-bots, izikebhe, nezinsipho ziye zaphazamisa idatha yomsebenzisi ngaphandle kwemvume yabo. U-Frank Abagnale, i-8 (Semalt iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende, ithi ngaphandle kwezihlungi zisetshenziselwa abanikazi bamabhizinisi ukuvimbela ukungena ngaphakathi nangobhodlela kumasayithi okuvakashela.
Abakwa-Spammers basebenzise ugaxekile wokudluliselwa, i-malware, ne-Trojan virus ukuze kutholakale ithrafikhi kusayithi lakho. Ezimweni eziningi, ama-opportunistic amangalela ukuthi aziwa njengezindawo ezinkulu ezivakashela isayithi lakho. Amathuluzi namasu ahlukene abekwe ukusiza abathengisi bokuqukethwe, nabanikazi bebhizinisi bahlukanise ithrafikhi emanga neyomthetho. Ngaphambi kokuvimbela i-bots, kuhle ukuba uqaphele ukuthi kunezintambo ezimbili ezinhle nezimbi.
Izinto ezisetshenziselwa ukuhlunga amabhulogi kanye nokuhamba kwangaphakathi
Izici eziningana zisetshenziselwa ukuhlunga amawebhusayithi angalungile kanye nomgwaqo wokukhohlisa. Izici ezinjalo zihlanganisa ama-hostnames, abahlinzeki bemisebenzi, indawo, nekheli le-IP. Isibonelo, umthengisi angasebenzisa isihlungi ngegama lomsingisi elivumelekile ukuze ahlunge umthumeli we-ghost nomgwaqo..Ukusebenzisa amasu okufakazela ukuhlunga i-malware, igciwane lesitokisi seTrojan kanye ne-ghost traffic kukhuthazwe.
I-Google Analytics igcina kakhulu idatha nerekhodi engafakiwe. Ngemuva kokucela umbiko othize, i-Google Analytics iphinda ibuyekeze idatha yakho, ihlunga ugaxekile we-ghost bese ibhalela ithrafikhi ngaphambi kokuhambisa umbiko kuwe. Imibiko ecacile ibuyiselwa ngokufaka izingxenye eziphambili noma ukwengeza ubukhulu obukhulu.
Umthelela Wedatha Ehlungiwe Emibhalweni Yakho
I-Google Analytics isebenzisa isampula algorithm ukuhlunga bese isampula idatha yakho. Ukuhlunga idatha kukhishwa ngokusebenzisa ukudalwa kwemibono emithathu efaka ukubukwa okuzenzakalelayo, ukuhlolwa, nokubuka okuyinhloko. Abathengisi ngenhloso yokuhlunga imoto ngokuphelele kumasayithi abo bayelulekwa ukuba bagweme ukuthumela idatha ku-Google Analytics.
Umphathi we-Google Tag usiza amaklayenti ukuba alungise ukuhamba kwawo emgwaqeni wangaphakathi noma wangaphandle ngaphambi kokuba uthunyelwe ku-Google Analytics. Ngezansi umhlahlandlela wezinyathelo ngezinyathelo ukuthi idatha ingena kanjani ku-Google Analytics:
Abahambeli namakhasimende bakchofoza ngekhasi lakho
Umphathi wetekisi ugijima i-Google Analytics Tag
Ukubukwa kwekhasi lakho kuthunyelwe ku-Google Analytics
I-Google Analytics ivula ikhasi lakho bese igijima izihlungi emakhasini akho
Ukubuka kwekhasi kufakwe kuhlu ekubukeni kwe-Analytics
Nokho, inqubo ebuyekeziwe ihlanganisa izinyathelo ezintathu zokuqala kuphela. Ngokusho kochwepheshe, ukusebenzisa i-Google Tag Manager kunezinzuzo eziningi nezinzuzo uma kuqhathaniswa ne-Google Analytics. Ngokuphathelene namathuba ebhizinisi afana nokumaketha, ukukhangisa, ukuhlola, nokuhweba, umphathi we-Google Tag usiza abathengisi ukuba benze imisebenzi evamile. Sondeza idatha yakho enembile kusuka kubhuthi nomgwaqo wangaphakathi futhi ujabulele izinzuzo ezinkulu emgqeni wakho webhizinisi. Umphathi we-Google Tag uye wadlala indima ebalulekile ekusizeni abasebenzisi ukuvimbela traffic engadingeki, i-malware, ne-Trojan virus ukwenza imizamo yama-akhawunti wabo namawebhusayithi. Imenenja isebenzisa ulwazi kanye neziguquko ukuvimba ithrafikhi engadingeki.